Police in South Africa have foiled an attempt to smuggle a stolen luxury car into Zimbabwe using donkeys to pull it across the Limpopo river. The suspects fled into the bushes towards Zimbabwe after their […]
A young girl has been killed by a lion while relieving herself at night at the back of a hut in a rural part of Zimbabwe, a police spokesman told the state-linked Chronicle newspaper. The […]
Anger over Mugabe daughter’s appointment
Prominent Zimbabwean actor Silvanos Mudzvova has condemned the appointment of President Robert Mugabe’s daughter, Bona Mugabe-Chikore, to the censorship board is the “final nail in the coffin for artistic freedom in the southern African state, […]
Zimbabwe’s High Court has outlawed corporal punishment for children both at school and in the home. The ruling comes after a parent complained that her child in grade one, a class for six-year-olds, had deep […]
‘Stop in-laws stealing widows’ houses’
The Zimbabwean government should stop in-laws from taking widows’ homes from them when their husbands die, says campaign group Human Rights Watch (HRW). In 2013, Zimbabwe adopted a new constitution that provides for equal rights […]
Zimbabwe’s sacked VP offers to ‘pay white farmer $1.4m’
Zimbabwe’s sacked Vice-President Joice Mujuru has agreed to pay compensation of $1.4m (£1.14m) to a white farmer whose land her family took, UK-based Zimbabwean journalist Violent Gonda has told the BBC’s Newsday programme. Ms Gonda […]
Zimbabwean remittance scheme ‘laudable’
With Zimbabwe’s sources of revenue drying up, the government is now focusing on remittances from the diaspora in an attempt to ease the cash crunch that many people are facing. Exporting firms are in decline, and the […]
Zimbabwe to cut 25,000 jobs because it is broke
Zimbabwe’s finance minister has announced that the government is going to cut 25,000 jobs in the civil service because it cannot afford to foot the bill, the state-run Herald newspaper reports. Patrick Chinamasa told parliament […]
Protest in Harare over ‘sex slaves in Kuwait’
Dozens of women took to the streets of Zimbabwe’s capital, Harare, today to demonstrate against Kuwait’s government over the alleged abuse of workers in the Gulf state. The nation has been shocked by harrowing accounts in the media of Zimbabwean women who had their passports […]
Zimbabwe signs ‘vital deals’ with Japan
Zimbabwe’s President Robert Mugabe is in Japan signing “vital economic agreements”, the state-owned Herald newspaper reports. Deals include money to improve Zimbabwe’s road infrastructure. The AFP news agency says that Japan’s Prime Minister Shinzo Abe said he wants to join […]